Gudoomiyaha Mandheera Oo Maxkamada Nairobi Kasoo Muuqanaya – XAMAR POST
Barasaabka Mandheera Ali Roba iyo laba sarkaal oo kale oo ka tirsan countigani mandera ayaa lagu amray inay maanta ka soo hormuuqdaan maxkamada shaqada iyo shaqaalaha Ee Nairobi kadib markii lagu edeyay inuu u hogansami way Amar Maxkameed oo la Soo Saray 25 Kii bishii Janaayo .
Xoghayaha ismamulka Mandera Cabdinuur Macallin Xuseen iyo Guddoomiyaha Golaha Adeegga Dadweynaha Ethila Maxamuud ayaa sidoo kale Ayaa iyagana agu edeeyay inay u hoggaan sami qateen amarrada maxkamadda oo la soo saaray 25-kii Janaayo.
Garsoraha maxkamada shaqada iyo shaqaalaha Dalka Onesmus Makau ayaa xililagaasi ku amaray xukumadda cali Ibrahim roba inay shaqada dib ugu soo celiyay afar wasir oo horay shaqada loga tiray ama ay dib u bixiyaan mishaaradka shaqaalahasi Laga Soo billaabo tan Iyo Markii shaqada Laga tiray .
Afartaasi wasir ayaa ku dacwadeeyay dowladda ismaamulka mandera in si qalad ah shaqada loga eryay , waxayna maxkamadu ku amartay gudoomiyaha ismamulka inuu xisaabiyo musharadka ka maqan ilaa maalintii shaqada laga eryay laguna bixiyo muddo 30 maalmood gudahood.
Si kastaba ha noqotee waxay ku guuldareysteen inay u hogaansamaan amarka Maxkamada , iyaga oo ku qasbay wasiradaasi inay mar kale dacwad u gudbiyan garsoraha Monica Mbaru.
Wasiradaasi shaqada laga eryay ee dacwada gudbiyay waxay kala yihiin Cabdicasiis Sheekh Maad oo ahaa wasirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha, Johora Abdi oo ah wasirkii hore ee Beeraha , Xolaha iyo Kalluumeysiga iyo Shamsa Mohammed oo ah wasirda
Jinsiga iyo Adeegyada Bulshada iyo Xasan Maxamed Axmed oo ahaa madaxa caafimaadka Mandera
Gavana cali Ibrahim roba ayaa wasiradni shaqada ka eryay bartimihii bishii febraayo ee sandkii hore 2020 waxaa una ku dhalilay inay ku gul dareesteen kasoo bixida waajibadka loo igmaday ee hormarinta danaha dowlada kowntiga.